नेपाल औषधि लिमिटेड समेत चलाउन नसक्ने सरकारले यति ठूलो निर्णय कसरी गर्यो ? | Hamro Doctor News
सोमबार, १२ असोज २०७७ /
नेपालमा थप ४ जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु
नेपालको आधा जनसंख्या रेबिज रोगको उच्च जोखिममा, विश्वभर वर्षेनी ५९ हजारको मृत्यु
नेपालमा थप १३ सय ५१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ७ सय ४२ जना स्वस्थ
धनगढीमा कोरोना संक्रमित ६३ वर्षीया महिलाको मृत्यु
चितवनमा थप एकजना काेराेना संक्रमित पुरूषकाे मृत्यु, मृतककाे संख्या १९ पुग्याे
नेपाल औषधि लिमिटेड समेत चलाउन नसक्ने सरकारले यति ठूलो निर्णय कसरी गर्यो ?
यतिवेला मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र मुख्यतः मुलुकी संहिता र जनस्वास्थ्य विधेयकमा केन्द्रित छ । ऐनमार्फत चिकित्सकलाई अपराधीझैं व्यवहार गरिएको भन्दै संशोधनको माग राखी चिकित्सकहरु आन्दोलनको मोर्चामा छन् । त्यस्तै जनस्वास्थ्य विधेयकमा रहेको चिकित्सकले औषधि सिफासि गर्दा जनेरिक नाम लेख्नुपर्ने प्रावधानले नेपालका औषधि उद्योगी आक्रोशित बनेका छन् । आन्तरिक उत्पादनले ५० प्रतिशत धान्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगीले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नेपाली उद्योग डुबाउने प्रपञ्चका रुपमा हेरेका छन् । जेनेरिक भनेको के हो र नयाँ व्यवस्था लागू गर्दाका चुनौति के हुन् ? भन्ने विषयमा हाम्रो डक्टरले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं औषधि उद्योगी उमेशलाल श्रेष्ठसँग कुरा गरेको छ ।
जनस्वास्थ्य विधेयकमा औषधिलाई जेनेरिकमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तपाईंहरुको असन्तुष्टि किन ?
यसमा मलाई लागेको दुईवटा कुरा छन् । औषधि उद्योगसँग सिधा सम्बन्ध राख्ने दुईवटा कुरा राखिएको छ । एउटा डाक्टरले औषधिको नाम सिफारिस गर्दा जेनेरिकमा गर्ने भनिएको छ । र, अर्को औषधिको मूल्य सरकारले नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ । यसमा मूख्यतः ऐन बन्दै गर्दा त्यसको परिभाषा हुनुपर्ने हो । ऐनमा जेनेरिक भनेको के हो भन्ने परिभाषा गरिएको छैन । औषधिको पनि परिभाषा गरिएको छैन । औषधि पनि एलोपेथी हुनसक्छ, आयुर्वेद, युनानी वा केही हुनसक्छ । त्यहाँनेर केही त्रुटी देखिएको छ । नेपालमा हालसम्म करिब ५०-६० अर्बको लगानी भैसकेको छ । अब जेनेरिक भन्नाले कस्तो भने, साहुजी मलाई बिस्कुट दिनुन भन्दा साहुजीलाई मन लागेको दिने वा उपभोक्ताले चाहेको दिने । त्यो झल्किन्छ । हामीले बुझ्दा । तर, औषधि जस्तो संवेदनशील चीज जुन विद्धान डाक्टरले सिफारिस गरेको औषधिको ठाउँमा जुनपनि प्रयोग हुने भयो । यस विषयमा कुनै सरोकारवाला क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी कसरी ऐन बन्यो ? म यहाँ नेपाली औषधि उद्योगको कुरा गर्न चाहान्न । विदेशबाट आउने औषधिहरुको स्थिति हामीलाई थाहा नै छैन । हामी कसरी उत्पादन हुन्छ देखेकै छैन । एउटा डब्लुएचओ जीएमपी सर्टिफाइड भन्ने कागजको खोस्टो हुँदैमा, जुन बाटोमा पनि किन्न पाइन्छ । त्यसका आधारमा नेपालमा आउने औषधि जसले थुप्रै प्रलोभन दिएर औषधि बेच्छ । त्यस्ताको नबिक्ला भन्न सकिन्न । यसले जुन देशको दायित्व वा नागरिकले गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा पाउने हक जुन संविधानमा पनि उल्लेख छ यसलाई असर गर्छ । हाम्रो लगानीभन्दा पनि मानव जीवनको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले वार्षिक रुपमा २-४ अरबको औषधि किन्छ र निःशुल्क जनतालाई दिन्छ । त्यसमा दुईतीनवर्षको कुरा हेर्ने हो भने सबैलाई थाहा हुन्छ, कस्ता कस्ता कम्पनीको औषधि ल्याइयो । कस्ताले ठेक्क पायो, कति पैसामा -पायो, त्यो औषधिको हालत के भयो, कुनैकुनैमा त सय प्रतिशत क्लेम गरेकोमा ४८ प्रतिशतमात्र भयो, कतिमा फंगस लाग्यो । औषधिमात्र होइन सबैकुरामा गुणस्तर र मूल्य सँगसँगै हुन्छ । मूल्य घटाएर गुणस्तरीय हुँदैन । जेनेरिक औषधि लेख्दा हामीले गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने बाध्यता नै भएन । हामीले केमिष्ट खुशी पारे हुनेभयो । जसले औषधि पसल खोलेर बसेको छ । जसले कम्तिमा ४८ घण्टाको तालिम लिएको छ औषधि व्यवस्था विभागले दिएको छ । कहाँ ४८ घण्टाको तालिम लिएको कहाँ बीसौं वर्ष पढेका डाक्टर अब कसले जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षाको निर्णय लिने ? अब यसो हेर्दा यो बडा लोकप्रिय कुरा जस्तो लाग्छ । नेताहरुलाई जनतलाई राहत दिएको जस्तो लाग्छ । तर, यसबाट कुनै राहत छैन ।
खासमा बनाउन त तपाईंहरुले बनाउने पनि जेनेरिक औषधि नै त हो नि ?
अर्को एउटा हामीले बुझ्ने कुरा, हामीले ब्राण्डेड औषधि बनाउँदै बनाउँदैनौं । हामीले बनाउने सबै जेनेरिक हुन । कस्तो हुन्छ भने, विकसित मुलुकमा कुनै कम्पनीले अध्ययन अनुसन्धान गरेर आविष्कार गरेको औषधिलाई हामी ब्राण्डेड औषधि भन्छौं । जसले विकसित कम्तिमा १५ देखि २० वर्ष उक्त औषधिको एक्सक्लुसिभ मार्केटिङ राइट पाउँछन् । र, एक्सुक्सिभ मार्केटिङको अवधि सकिएपछि अरुले बनाउने अधिकार पाउँछौं । तर, हामी कम विकसित मुलुकलाई यो नियम लाग्दैन । हामीले बनाउन पाउँछौं ।
जुन अहिले हामीले बनाइरहेका छौं । जस्तै प्यारासिटामोल बनाइरहेका छौ. । आफ्नो पहिचानका लागि । जस्तो न्वारानमा तपार्ईंको एउटा नाम मेरो अर्को नाम । हाम्रो जेनेरिक भनेको मान्छे । अझ भनौं होमोसेपियन्स । हामीले राख्ने त त्यही न्वारानकै नाम हो । खास यी औषधि जेनेरिक नै हो । यसलाई विश्ववजारमा ब्राण्डेड जेनेरिक भनिन्छ । जुन कम्पनीले अरबौं लगानी गरेको छ । त्यसको बजार त अब केमिष्टको हातमा पुग्ने भयो । जुन गलत हो । संसारभर यस्तो छैन । यदिन केमिष्ट पनि फर्मासिस्टले चलाएको छ भने एउटा कण्डिसन छ । अर्को, सबै नेपालमा बन्ने वा भित्रिने औषधिको गुणस्तर समान भएमा मात्र यो नियम लगाउन सकिन्छ । म त सरकारलाई के सल्लाह दिन्छु भने, सन् २०३० मा वा ४० मा यो नियम लगाउन हामीले औषधिको गुणस्तर वा प्रविधिमा के सुधार ल्याउन सकिन्छ अध्ययन गरौं । यो कसैको लहड वा हल्लामा नियम लगाउने होइन । कस्तो छ भने नेपालमा कुनै उद्योग फस्टाउन खोज्यो भने त्यसलाई ऐनकानुन लगाएर धरासायी बनाइन्छ । जस्तै, कार्पेट हेरौं, गार्मेन्ट हेरौं ।
जेनेरिक सिफारिस र मूल्य नियन्त्रणले नेपाली उत्पादन धरासायी बनाउन खोजिएको भन्न खोज्नु भएको हो ?
आफ्नो मेहेनतले लडिबुडी गरेर बल्लतल्ल मागको ५० प्रतिशत औषधि नेपालमै बन्न थालेको छ । अब यसले कसको छाती पोल्यो थाहा छैन । यो औषधि उद्योगलाई लडाउनु पर्छ नेपाललाई अझै परनिर्भरताको उन्नतिपथमा लम्काउनपर्छ भन्ने उल्टो बुद्धि भएकोले यो विषय उठायो ।
अब लागौं मूल्य नियन्त्रणको विषयमा । एकछिनलाई एम्लोडिपिनको उदाहरण लिउँ । त्यो एउटा ब्लडप्रेसको औषधि हो । अमेरिकमा ब्राण्डेड एम्लोडिपिन २० ट्याव्लेटको ८ डलर पर्छ । जबकी अमेरिकमै नन ब्राण्डेड वा ब्राण्डेड जेनेरिक एम्लोडिपिनको करिब १ डलर ७५ सेन्ट पर्छ । नेपाली झण्डै दुईसय रुपैयाँ । नेपालमा हामीले उत्पादन गर्ने २० ट्याव्लेटको १ सय ५ रुपैयाँ पर्छ । नेपालमा किन मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्यो । भारतमा नै यो भन्दा महंगो पर्छ । अब भारतकै कुरा गरौं । भारतले करिब ३ सय औषधिमा मूल्य नियन्त्रण गरेको छ । तर, उसले ३५-४० वटा शीर्षकमा औषधि उद्योगलाई सहुलियत दिएको छ । कतिपय राज्यमा त औषधि उद्योगलाई जग्गा पनि दिइएको छ । त्यस्ता सहुलियत पाएका कम्पनीसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । नेपालमा हामीलाई सरकारले के दिएको छ । कुनै सहुलियत छैन । तर, मूल्यचाहीँ त्योभन्दा कम गर भनेर न्याक्न पाइन्छ ? ठीक छ सरकारले हामीलाई केही सुविधा देओस् न हामीपनि सरकारलाई दिन्छौं । यो भन्दा पनि सस्तोमा दिन्छौं औषधि, हामीलाई आयकरमा छुट देओस् अरुपनि सुविधा दिने विषय धेरै छन् । या त सरकारले हामीसँग किनोस् सित्तैमा बाँडोस अहिले जसरी ।
अब त विधेयक बनेर आइसक्या छ, कार्यान्वयनमा जाने समयमा कसरी पहल गर्नुहुन्छ ?
यस विषयमा हामीले मान्य उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसँग भेट्यौं । के के कारणले यो नियम लागू हुनहुँदैन भनेर पनि जानकारी गरायौं । मूल्यका विषयमा पनि बोल्यौं । त्यस्तै हामीले संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसदहरुसँग छलफल गर्यौं । औषधि व्यवस्था विभागसँग छलफल गर्यौं । औषधि व्यवसायी महासंघ लगायत संस्थासँग पनि हामीले छलफल गर्यौैं । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई हामीले भनेका छौं हामीलाई पनि समितिमा बोलाएर कुरा गर्न पाउँ भनेका छौं ।
जबर्जस्ती ऐन लादियो भने के हुन्छ ?
जबर्जस्ती कार्यान्वयन हुँदै हुँदैन । यदि गर्यो भने सरकार नेपालको उद्योग विरोधी भन्ने बुझिन्छ । जबर्जस्ती गर्नसक्छ सरकारले, औषधि उद्योग बन्द गर पनि भन्न सक्ला । बन्द गरौंला । यदि यसलाई जबर्जस्ती लाद्न खोज्यो भने हामी त साँचो बुझाइदिन्छौं सरकारलाई । गर्नोस तपाईँहरु भनेर । जाबो एउटा नेपाल औषधि लिमिटेड त चलाउन नसक्ने सरकारले औषधिको विषयमा यति ठूलो निर्णय लिनुहुँदैन । जति सस्तोमा दिनु छ दिनुस्, जेनेरिकमा दिनुछ दिनुस् । हामीलाई के समस्या छ ? हामी औषधि छाडेर रक्सि उद्योग खोलौंला, चुरोट उद्योग खोलौंला । त्यो त खोल्न पाइन्छ नी ?
Last modified on 2018-09-04 07:33:31
मस्तिष्कघातका बारेमा जान्नै पर्ने कुरा
औषधि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले बनाएको समितिको कुनैपनि निर्णय मान्य हुँदैनः आचार्य
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई नमूना अस्पतालको रुपमा विकास गर्छुः अध्यक्ष भट्टराई
रुघाखोकी लाग्दैमा कोरोना संक्रमणको भय नपाल्नुस, यसरी गर्नुहोस् ख्याल
कोभिड उपचारका लागि देउराली जनताले सुरु गर्यो फ्याभिर-२०० एमजी ट्यावलेटको उत्पादन
चिकित्सा तर्फ स्नातकोत्तर तहको परीक्षाको सूचनामा कमजोरी भएको भन्दै सच्याउन गोदानको माग
विवादास्पद शवबारे के भन्छ वीर अस्पताल ?
मानिसमा हर्ड इम्यूनिटिको विकास भएपछि कोरोना भाइरस मौसमी रोगमा परिवर्तन हुने !
Samples Tested - ९,९८,४०७